HG Wells. Kuyeuka iyo huru yeChirungu sainzi yekunyepedzera munyori | Zvazvino Zvinyorwa
HG Wells. Kurangarira mukuru weChirungu sainzi munyori wenhema
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Fikisheni yesainzi, Vanyori, Fantasy, Novela
Mufananidzo weHG Wells naGeorge Charles Beresford.
Herbert George Wells Akafa munaAugust 13, 1946 muLondon. ndanga ndine 79 makore uye aive munyori wenhoroondo, muzivi uye pamwe munyori anozivikanwa wechiRungu we sayenzi ngano, mutangiri weiyo genre. Isu tese takaverenga mamwe emabasa ake uye kana zvisina kudaro, takavaona mune zvisingaverengeke mafirimu anoenderana izvo zvakaitwa pamusoro pemakore.
Nhasi ndinorangarira izvi zvekare zvemhando iyi nevamwe mitsara kubva ku4 yenhau dzake inonyanya kuzivikanwa: Iyo Nguva Mashini, Hondo yeVenyika, Chitsuwa chaDoctor Moreau y Munhu asingaonekwe. Ini zvakare ndinoongorora iwo mafirimu anoenderana.
1.1 Iyo nguva Muchina
1.2 Hondo Yenyika
1.3 Chitsuwa chaDoctor Moreau
1.4 Munhu asingaonekwe
2 Ndeipi yekuchengetedza?
Akazvarirwa mukati BromleyMuKent County, aive mwana wechitatu wemhuri yepasi-yepakati-mhuri yaitarisira kuti vaive nedzidzo yakanaka.
Apo a ngozi Akamumanikidza kuti agare pamubhedha kwechinguva, akatora mukana kuverenga zvakawanda, izvo zvakaita kuti ade kunyora. Ipapo akabata iyo tuberculosis uye akazvipira zvakazara kunyora. Aive akawandisa uye rake rese basa rinokanganiswa nekudzika kwake zvematongerwo enyika.
Akatsigira izvozvo sainzi nedzidzo ivo vaizove mbiru mbiri dzakakosha dzenzanga yeramangwana umo munhu aigona kutora kusvetuka kudarika.
En 1895 yakabudiswa Iyo nguva Muchina, kutanga seakateedzana uye gare gare sebhuku uye yaro kubudirira yakanga iri pakarepo. Kubva ipapo akavasunga necheni. Gore rimwe chetero iye zvakare akaburitsa Kushanya kunoshamisa, uye mumakore matatu anotevera enganonyorwa nhatu dzakawedzera mukurumbira wake: Chitsuwa chaDoctor Moreau, Munhu Asingaonekwe y Hondo Yenyika.
Iyo nguva Muchina
Mutemo wechisikirwo watinokanganwa ndewekuti kungwara kwepamoyo ndiko kuripa shanduko, njodzi uye kusagadzikana ... Zvisikwa hazvimbofarire huchenjeri kudzamara tsika nehunhu zvisina basa. Iko hakuna huchenjeri uko pasina shanduko uye pasina chikonzero chekuchinja. Mhuka chete dzine hungwaru ndidzo dzinofanira kusangana nemhando dzakasiyana siyana dzekuda uye njodzi.
Simba ndiwo mhedzisiro yekushaiwa; chengetedzo inosimbisa mubairo weutera.
Zvichida kudzidza kushandisa muchina wekushinga, kufamba ipapo kusvika kumiganhu yehupenyu hwazvino, kuwanikwa nguva nenguva paradhiso pfupi isina ramangwana kana rakapfuura, pasina mbiri yekufungidzira uye kutya.
Iwe haugone kufamba nenzira ipi neipi nenguva, haugone kutiza kubva panguva iripo.
Pamwe chinonyanya kuzivikanwa chinogadziriswa chemufirimu wenyaya iyi (uye chaunofarira) ndicho chakaita nyeredzi Rod taylor en 1960 uye kuti yakahwina iyo Oscar kune akanakisa mhedzisiro. Yekupedzisira yaive kubva muna 2002 uye nyeredzi Guy Pierce naJeremy Irons.
Panguva yemasikati isu takabatikana nezvedu zvisina basa zvekuti zvinoita sekunge hazvigoneke kwatiri kuti mumwe munhu kumusoro uko atarise nhanho dzedu uye, nekushingirira uye nenzira, kuronga kukunda kwenyika. Husiku chete hunokwanisa, nerima raro uye kunyarara kwaro, kwekugadzira mamiriro kuitira kuti maMartian, maSelen uye nezvimwe zvisikwa zvinogara muchadenga, zvive nenzvimbo mukufunga kwedu.
Chii chakanakira chitendero kana chikamira kuvapo mukutarisana nenjodzi?
Kusvikira panguva iyoyo handina kunzwisisa kuti ndakanga ndiripo ndisingabatsiri uye ndega. Pakarepo, sechinhu chinodonha pandiri, kutya kwakandibata.
Izvo zvinokwanisika kuti kupinda kwevaMartian kuchave, pakupedzisira, kunobatsira isu; zvirinani, zvakatibira iko kuvimba kwakadzikama mune ramangwana, inova ndiyo sosi yechokwadi yekudzora.
Zvokutaura nezve anozivikanwa nhepfenyuro Chii chakaita Orson Welles yenyaya iyi muna Gumiguru 30, 1938? Yakanga iri mitambo yemitambo, awa imwe, yakaverengwa mukati newscast fomu miniti yekupedzisira. Yakapinda zvakadaro vateereri zvekuti munhu wese akatenda chaiko kupinda kwevatorwa. Yakaramba iri yenguva yeredhiyo senhoroondo sezvisingadzoreke. Uye firimu kwadzakabva havana kukwanisa kukurira.
Kunyanya classic, iyo yakakunda iyo Oscar yekuona zvinoonekwa, yaibva muna 1953. Uye yazvino kwazvo ndiyo yaive nyeredzi Tom Cruise mu 2005.
Chitsuwa chaDoctor Moreau
Mhuka inogona kutyisa uye nehungwaru zvakakwana, asi zvinotora murume chaiye kuti ataure nhema.
Handisati ndambonzwa nezvechimwe chinhu chisina basa icho, nekukurumidza kana gare gare, shanduko isina kudzima kubva kuvapo. Uye newe? Uye kurwadziwa hakudi.
Mhuka dzinogona kuve nehunyanzvi uye hunotyisa, asi murume chete ndiye anokwanisa kunyepa.
Icho chokwadi chekuti zvisikwa izvi zvaive zvisiri chinhu kunze kwemhuka dzinotyisa, zvimiro zvinotyisa zvevanhu, zvakandiita kuti ndisagadzikane zvisina tsarukano pamusoro pezvavaizokwanisa, zvakatoipisisa kupfuura chero kutya chaiko.
Ini ndasara neyakajairwa kubva kuma70s iyo yavakaita nyeredzi mairi Burt Lancaster naMichael York muna 1977. Asi kune imwezve yakaitwa kwapera makore makumi maviri na Marlon Brando naVal Kilmer.
Pfungwa hombe uye dzinoshamisa dzinopfuudza ruzivo kazhinji hadziite zvakanyanya kuvarume nevakadzi pane zvidiki, zvinowoneka.
Varume vese, kunyangwe vakadzidza zvakanyanya, vane chimwe chinhu chekutenda pamusoro pavo.
Ini ndega, hazvishamise kuti mudiki murume anogona kuita ega! Kuba zvishoma, ita zvishoma kukuvara, uye ndipo painoperera.
Ndiri murume akasimba uye ndine ruoko runorema; Kunze kwezvo, ini handioneke. Iko hakuna kupokana kuti aigona kuvauraya vese vari vaviri uye kupukunyuka zviri nyore, kana achida. Vanobvumirana?
Uye pane izvi ini ndinotorawo huru Claude Mvura izvo zvakaita kuti kumeso nemuviri zvioneke kune protagonist mune zvekare zve 1933. Asi kune zvakare mitero uye misiyano pamazita akadai Murume Asina mumvurine Kevin bhekoni mugore 2000. Uye kunyanya, dzakateedzana makumi manomwe kubva paudiki hwangu kune iyo ini ine rudo rukuru rwekuti ndaizvida sei Ben murphy, protagonist yaro.
Yakaoma choise. Saka chinhu chakanakisa kuita kuverenga (kana kutarisa) chero yenyaya dzaWells.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Fikisheni yesainzi » HG Wells. Kurangarira mukuru weChirungu sainzi munyori wenhema
Iri rakanakisa bhuku sagas
Vanyori vanonyanya kutaura munhoroondo